အခမဲ့ဆိုတော် Mizuki ညမ်းဂိမ်း
ဟယ်လို! ငါ့ကတိတင်ပြဖို့ပျော်ရွှင်မှုစီမံကိန်းအကြောင်းငါနှင့်အခြားသူများလုပ်ဆောင်နေကြပြီ၊ပေါ်ပြီးခဲ့သည့်အဘို့ ၁၈ လ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးမျှဝေသောစိတ်နှင့်အကျိုးစီးပွားအတွက်အမှန်တကယ် busty တြန္းငယ်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ထုတ်လုပ်ရန်စဉ် Mizuki–လုံးဝအခမဲ့ XXX လွှတ်ပေးသွားမယ့်လမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင်ခံစားရကြောင်းညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း။ ပါကဤတစ်ဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%အခမဲ့ရာက္ဇာဂိမ်း:သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်တစ်ပြားပေးဆောင်ဖို့ဒါကြောင့်ပျော်မွေ့လျက်မသင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကစားဂိမ်းမှတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး။ အဆိုပါအဖွဲ့ကယုံကြည်ကြောင်းအခုအချိန်မှာ၊ဒီအဖြစ်နိုင်အဆိုပါ#၁ အကြိုက်ဆုံးပုံစံလိင်ဂိမ်းခေါင်းစဉ်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။, ရဲဆိုကြသည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့အဖြစ်ဆက်လက်မှတ်ချက်ပေးရန်ဖို့ဒီလိုကျွန်တော်အထင်ကစစ်မှန်တဲ့င့်! ဒါကြောင့်၊သင်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်မြျှောအပေါ်တစ်ဦးသာယာသောအလိုးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဖြစ်နိုင်အလွန်ကောင်းစွာအမှုဖြစ်စဉ် Mizuki သွားကြဖို့လမ်းဖြစ်၏။ ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ပိုသိ၊ငါဝမ်းသာပြောဆို၏နားပယ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုစီမံကိန်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အရမ်းပျော်နှင့်အတူအဘယ်အရပ်မှာဖွင့်! အပေါ်ဖတ်ရန်:အပေးမယ်မွတ္သားျခင္း၏အဆုံးအားဖြင့်ဤအနည်းငယ်သာအက်ဆေးချင်ကြပါမယ်ငါတို့အခမဲ့ဂိမ်းနှင့်မှုတ်၏ဝန်တစ်ချက်ချင်းလက်ငင်းအတွက်။
ကနေရသွားချင်သောသေချာစေရန်တစ်စိတ်ကူးစကားမှာအတွေ့အကြုံစဉ် Mizuki။ ဒီရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နှင့်အတူကြယ်စာရေးဆရာများအကြောင်းသိ busty တြန္းညမ်းဂိမ္းနယ်ပယ်။ လူများ၏အရေအတွက်အလုပ်၏ဤလိုင်းအဘယ်သူသည်လုပ်ကအတော်လေးပါးလွှာ၊သို့သော်–ကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးလူအများအတွက်အလုပ်အကိုင်နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊သူတို့အရေအတွက်မှကြွလာသောအခါကျမ်းစာပြောဆိုပါ။ မှနောက်ဆုံးအချက်ကျနော်တို့ဖိုင်၊ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် ၂၃၀၊၀၀၀၏စကားဆြးေႏြးေ။, နေစဉ်ဒါကြောင့်သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်ဘို့ထိုအဖြစ်ခုန်ပါကသင်သည်တကယ်မရှိတဲ့စိတ်အားထက်သန်၊ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသောဇာတ်လမ်းကအတော်လေးကောင်းတစ်ဦးတယောက်ကိုနှင့်အဆက်ဆက်၎င်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကသင်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်။ အများကြီး NPCs ဘေးထွက်ဆိုး storylines နှင့်ကျပန်းမေးခွန်းတွေသင်မေးနိုင်–ထိုသူတို့အဖို့ပျော်စရာင့်ဖြင့်ကြည့်လျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးချင်သောအနည်းငယ်ကြံစည်မှုမှပူးတွဲပါအားလုံး၏အလိုး! အဖြစ်ထပ်မံချဲ့ထွင်ဆက်ပြောသည်နေကြတယ်၊ကျွန်တော်တို့လည်းအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ဇာတ်ကောင်၏အမည်ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မူထူးခြားတဲ့ဘော်နှင့်ပုံပြင်များကိုပြောပြ။, ညှိနေဖို့ပိုပြီးအချက်အလက်ပြောင်းခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာဖြန့်ချိ–သူတို့ကသူတို့ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်!
ရှိပါတယ်ပြစ်တွေအတွက်ရှိခြင်းအွန်လိုင်း-သာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊နှင့်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့လေးမြတ်တန်ဖိုးထား၏ဒုက္ခအဘယ်သူရှေးရှေးမချိတ်ဆက်နေဖို့ကိုအင်တာနက်ကို၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုအင်္ဂါအမှန်တကယ်အတော်လေးကောင်းတစ်ဦးခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့ဤတစ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကြီးမြတ်ဆုံးရှုထောင့်နှင့်ဂျင်၏မရှိခြင်းများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုချွေတာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကို–ဒါဟာအားလုံးသင်အဘို့ပြုပြီးနောက်ရှိသမျှအဓိကဆုံးဖြတ်ချက်အောင်။, သင်အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်ထုံးစံကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကြိုးစားဖို့အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာပါအကြောင်းအရာ၊ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အဓိကတိုးတက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်စာရင်းပြုစုရရှိနိုင်လျှင်ပင်သင်ရုတ်တရက်အဆက်ပြတ်၊အနီးကပ်ကိုလိုင်းသို့မဟုတ်တခြားအသမြှ။ မိုဃ်းတိမ်ဂိမ္းဓာတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဘို့ကြီး-။ သင်သိခဲ့သောအဆိုတော် Mizuki သည်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းခေါင်းစဉ်? လက်ျာရဲ့! ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေလက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်မီသောဘမြေခွေးကဲ့သို့ရှု၊Chrome ဒါမှမဟုတ်အစွန်း၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ငါတို့မပါဘဲဂိမ်းအတွက်ဂရုစိုက်ပါ။, အဲဒီဂိမ်းအနေနှင့်ဆင်တူလွန်း၊ဒါကြောင့်သင်မည်မဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေမည်သည့်အင်္ဂါရပ်သွားသည့်အခါသင့်ရဲ့မိုဘိုင်းသို့ကယ်တင်သောအဓိကကွန်ပျူတာတည်းဖြတ်ခြင်း။ ကိုရှုထောင့်အပြောင်းအလဲဖြစ်ကြ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်။ ဘေးဖယ်နေ၊သူတို့တွေဟာအတူတူပါပဲ!
ဘာလိုးဂိမ်းမပါဘဲပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်အပြည့်အဝဂျီ၏အောင်မြင်မှုများအကြောင်းသင်ပေးနိုင်ဖို့သော့ဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုအားဖြင့်? ကျွန်တော်သိသည်အစောပိုင်းအပေါ်ဒီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဓိကအစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းစနစ်နှင့်ကျွန်တော်နှင့်အတူဒါကြောင့်မင်္ဂလာ။ အခုအချိန်မှာ၊ကျော်ရှိပါတယ် ၂၀၀ အောင်မြင်မှုများအတွက်ဂိမ်းအကြောင်းသင်ပေးနိုင်ဖို့သော့ဖွင့်။ မပဲအိတ္သော်လည်းခေါင်းစဉ်:ချင်းစီနှင့်အတူအောင်မြင်ရန်အသုံးျတစ်မူထူးခြားသောဆပ်ကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းဒေသများအတွက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံအစုအပုံများ၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်အထူးအသူမြားမိနစ်ကြာလိုးလစ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လိုက်ကိုယ်ကိုကိုယ်! တော်တော်အေးမြ၊အယ်?, အနုပညာလက်ရာများအဖွဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးအားပေးအကြွေးမှာ:ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမြတ်သောအလိုးအမိုးမ်ားနောက်ဤအောင်မြင်မှုများနှင့်သင်အမှန်တကယ်သွားရန်အကျိုးခံစားရသည့်အခါသင်တဆင့်တိုး။ အဲလည်းအထူးဆုအတွက်ပထမ ၁၀ လူအလုံးအောင်မြင်မှုများ၊အရာလုံးဝအဘယ်သူမျှမမှစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်အောင်နိုင်သေးပါ! အများစုဟာလွယ်ကူများမှာ၊အချို့တို့သည်ခက်ခဲပြီးအနည်းငယ်–ကောင်းစွာရုံသူတို့အဖို့အိပ်မက်ဆိုးပြုရ။ သင်အကောင်းဆုံးအကျန်နှင့်ထွက်လာအဖြစ်#၁ အစားအပေါ်အစဉ် Mizuki? ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားင့်အထွက်ရှာ!
ကြည့်ရအောင်မရိုက်ပုတ်ချုံပတ်လည်မှာဒီမှာပါ:ကစားနေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိပါတယ်၊တစ်တော်တော်မြင့်မြင့်အဆင့်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သွားနိုင်ထောက်ပံ့ဖို့တလက်ဂိမ်း။ ဘပေးထားသောသင်ဖို့ရွေးချယ်စရာကစားစဉ် Mizuki ကိုအသုံးပြုမှသာသင့်ကြွက်–ဘာမှ! ဒီအပ်ပေးစေခြင်းငှါသင်တို့အားလုံးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်စွမ်းရည်ကိုလိုအပ်ကြောင်းအသုံးချဖို့အခမဲ့လက်ရာများအခြားလှုပ်ရှားမှုများ။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားစီရင်ခြင်းငှါ၊။ သင်သည်ကစားအလိုးဂိမ်းနှင့်ခင်ဗျားသွားချင်မှပယ်တွင်လူရှုပ်များ–ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်အင်အားကစားသမားအသုံးပြုရန်လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာအမျိုးမျိုးသောအချက်များအခါသူတို့ပဲကပ်အတည်း?, ကိုဖန်ဆင်းစုစုပေါင်းအာရုံသည်ငါတို့အဘို့နှင့်ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းသင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်မည်အတည်ပြုကျွန်ုပ်တို့သံသယဤနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ–သင်စဉ်းစားဖို့အဆင်သင့်နောက်ဆုံးတော့အကျိုးသို့နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးလိုးကား။ ကျနော်တို့သေချာများမှာမျှော်လင့်ပါတယ်! ရကုန်ချရန်နှင့်စီးပွားရတက်လက်မှတ်ရေးထိုး၊အယ်? ဒါဟာဖြစ်မသွားမယ့်တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့ပေါက်ကွဲမှု၊ဒါကြောင့်အပေါ်ရရန်အတွက်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစတင်! စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးကံကောင်းပါစေ။